သင့်ရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို ယခုအောက်တိုဘာလအတွင်းမှာပဲ FBSက ဖော်ဆောင်ပေးပါတော့မယ်
FBSသည် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှ သန်းနှင့်ချီသော ဖောက်သည်များရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုက်အ၀န်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. သင့်အနေနင့် ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုအသိုက်အ၀န်းထဲသို့ အမှန်တကယ်ဝင်ရောက်လိုတယ်ဆိုပါက သင့်ကို အမြဲတမ်းနွေးထွေးစွာ လက်ကမ်းကြိုနေပါမည်. ယခုလအတွက် စိတ်ကူးအိပ်မက်များ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီ ပရိုမိုးရှင်းမှာ - သင့်ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်များကို ပြောပြကာ ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီး အခွင့်အရေးကောင်းကို ရယူလိုက်ပါ!
အဓိကကတော့ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေက ဆန်းသစ်မှုရှိဖို့ပါပဲ - စိတ်ကူးအဆန်းသစ်ဆုံး အထူးခြားဆုံးဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်များကို ရွေးချယ်ပြီး ထိုစိတ်ကူးတွေကို အမှန်တကယ်အကောင်အထည်ပေါ်လာအောင် ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးသွားပါ့မယ်.
ပရိုမိုးရှင်းပြိုင်ပွဲကျင်းပနေတာကလည်း ယခုအခါ အတော်ခရီးပေါက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်. ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲသူတော်တောများများဟာလည်း သူတို့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့ကြပါပြီ. သူတို့တွေထဲကမှ:
အင်ဒိုနီးရှားမှ Deah Apriဟာဆိုရင် သူ့အမေရဲ့အိမ်ဝိုင်းကို ခြံစည်းရိုးကာရံနိုင်ခဲ့ပါတယ်
ဗင်နီဇွဲလားမှ Mrs Blanca Camargoကတော့ အ၀တ်လျှော်စက်တစ်လုံးရရှိသွားပါတယ်
ထိုင်းနိုင်ငံမှ Oraya Toaeကတော့ မုန့်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက် မုန့်ဖုတ်စက်တစ်လုံးရရှိသွားပါတယ်။ မုန့်ဆိုင်ကရတဲ့ငွေကိုစုပြီး အိမ်ဝယ်မယ်လို့လဲ သိရပါတယ်.
လစဉ်လတိုင်း အစဉ်အလာမပျက် စီစဉ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်:
သင်၏ personal areaရှိ ပရိုမိုးရှင်းစာမျက်နှာကို သွားရောက်ပါ
ပုံတစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ပြီး သင်၏ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာနှင့် ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ
FBSတရားဝင် ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာရှိ မူလပရိုမိုးရှင်းအကြောင်းအရာပါပို့စ်ကို လင့်ခ်အတိုင်းသွားပါ
ထိုပို့စ်အောက်ရှိ ကွန်းမန့်တွင် သင်၏စိတ်ကူးအိပ်မက်များကို ရေးပေးလိုက်ပါ
ကျေးဇူးပြု၍, သင့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြောပြပါ. သင့်ရဲ့အိပ်မက်က သင်အပြောကောင်းရင်ကောင်းသလောက် တကယ်ဖြစ်လာဖို့အခွင့်အရေးပိုများလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးကိုယ်တိုင်ကစိတ်ကူးအိပ်မက်တစ်ခုမဟုတ်လို့ ငွေကြေးအတွက်ဆန္ဒမပြုပါနဲ့။.
FBSသည် ၁၀သန်းမြောက် ရောင်းဝယ်သူအမှတ်အသားကို ထိမိလာပါပြီ!
ကျွန်တော်တို့ဟာ ခုဆိုရင် ၁၀သန်းမြောက်ရောင်းဝယ်သူများထံ နီးကပ်လာပြီး၊ ကျွန်တော်တို့အတွက် FBS နိုင်ငံတကာ အရောင်းအဝယ် မိသားစုကြီး လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာနေသည်ကိုတွေ့ရတာ အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားလျှက်ရှိပါသည်